Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka hadlay qorshaha horyaalla – Radio Muqdisho
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka hadlay qorshaha horyaalla
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in maanta ay bulshada Soomaaliyeed ay u tahay maalin taariikhi ah, isagoo munaasabadaasi awgeed hambalyo u diray shacabka guusha u soo hooyatay iyo sida ay u dhacday doorashada.
Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa u mahadceliyay musharixiinta la tartameysay iyo intii ka qeyb qaadatay in lagu guuleysto hirgelinta dowlad goboleedka Galmudug, waxaana uu ammaan u jeediyay hay’adaha amniga sida ay ugu guuleysteen xaqiijinta Nabad gelyada shirka.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya inay garab istaagaan dowlad goboleedka ay dhiseen, isla markaana ay gacan ka geystaan sidii maamulka uu ugu guuleysan lahaa hadafka loo doortay.
“Waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedka Walaalaha aan nahay ee Puntland inay kala shaqeeyaan amniga, iskaashiga iyo arrimaha muhiimka u ah iskaashiga labada maamul, waxaan diyaar u nahay la shaqeynta Maamullada dariska la ah” ayuu yiri Mudane Cabdikariin.
Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay Culimaa’udiinka Ahlusunna inay ka qeyb qaataan dhismaha inta ka hartay dowlad goboleedka Galmudug.
Xukuumadda oo hambalyo u dirtay Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug